Qiimeeynta Cayaaraha ee Degmooyinka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sawirle: Anna Rydén / Sveriges Radio
Qiimeeynta Cayaaraha ee Degmooyinka
La cusbooneeyay onsdag 26 oktober 2011 kl 13.55
La daabacay onsdag 26 oktober 2011 kl 13.26
Degmooyinka ey maamulaan garabka Casaan-cagaarka ayaa taageero dhaqaale ee ka ballaaran u fidiya ururrada cayaaraha, marka loo barbar-dhigo kuwa ey awoodda gacanta ku hayaan garabka Midig ee isku-tagga. Waa sida ku cad war-bixin laanta wararka Ekot ee idaacadda Iswiidhen ku wareeysatay ururrada daladda cayaaraha ee dalka ka jira maantana shaaca laga qaaday.
Catarina Laestadius, ahna masuulka kubbada gacanta ee dhallaanka BBK ee degmada Boden uuna gacanta ku hayo maamulkeeda xisbiga Sooshiyaal-dimoqoraadiga ayuu dhaqaalaha degmadu ugu deeqaa gaarsiisan yahay 2 400 ruuxiiba degmada isku-celcelin.
Waa mid loo baahan yahay, maadaama ey ciyaaraha ku baxaan kharash fara-badan. Haddii middaa waalidka lagu deyn lahaana ma ahaan mid loo siman yahay.
Degmooyin gaarsiisan 278 ayaa jawaab ka soo bixiyey su'aalihii ey ka heleen ama u direen ururrada daladda ciyaaruhu iyo sida ey u taageeraan. Iyadoona ey aad ugu kala duwanaayeen degmooyinku taageerada ey u fidiyaan ururrada ciyaaraha.